Vingchekwa otu ego iji mefuo dollar | Martech Zone
Monday, March 3, 2008 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
N'abalị ụnyaahụ, elere m mbido (mana atụfuru ihe fọdụrụ) nke Oprah's Big Nye show. M hụrụ n'anya na premise - nye onye $ 2,500 na onye na-eme ihe kasị mma ọrụ na-azụ ihe kasị ego Enwee Mmeri.
N’ime ihe nkiri ahụ bụ na ị ga-aga zute mmadụ ma ọ bụ ndị ị na-enyere aka. N'ihi ya, nrụgide ahụ abụghị naanị ịrụ - ọ bụ n'ezie ịghara ịhapụ ndị mmadụ ka ị nọrọ ebe ahụ iji nyere aka.
Ihe m na-agụ dị ka onye na-esochi bụ na $ 2,500 bụ ihe na-enweghị isi. The $ 2,500 bụ n'ezie iji nyere gị aka ịghara ichegbu onwe gị banyere njem, oku ekwentị, nzukọ, wdg. Ezigbo ego ahụ dị na nsọtụ ọzọ nke ịkpọ ekwentị na ụlọ ọrụ ma ọ bụ onye ama ama. Ọ bụrụ n ’itinye uche n’ ebe na otu ị ga - esi jiri $ 2,500 mee ihe ka ị nwee ike pịa ọtụtụ n’ime ya, ị ga - efufu. Ọ bụrụ, kama, ị ga-eleghara $ 2,500 anya ma tinye uche na nnukwu ego - ị na-ala!
Ego ole bụ Dollar?
Ihe yiri m bụ itinye ego n'ọrụ anyị. Ọ bụrụ n’inweta ego, ichegbu onwe gị maka etu ị ga - esi chekwaa zụta ngwa ọrụ ọfịs nwere ike bụrụ ogbi. Ihe Nlereanya: Ya mere, ị nwere onye ọrụ na-eme $ 30 / hr onye na-arụ ọrụ dị mkpa na $ 70 / hr na-enyocha ịntanetị iji chekwaa $ 25. Ọ bụrụ na ha ejiri otu awa zụọ ahịa n'ịntanetị maka ọnụahịa kacha mma na igwe obibi akwụkwọ ọhụụ, ị ga-efu $ 15. Kama nke ahụ, ị ​​kwesịrị ịzụrụ onye nbipute mbụ ị hụrụ wee ree ọrụ onye ọrụ ahụ maka $ 70. Gaara eme ihe karịrị $ 15.
Kedu ihe ọzọ? N'ihi na ịgagharị na Intanet na-anwa ịchekwa ego ole na ole na ngwa nbipute ma ọ bụghị ihe were gị n'ọrụ were mee. Ha gaara arụ ọrụ ha, ma ọ ga-akara gị mma ma a sị na ha rụrụ ọrụ. Ha gaara emezu ebum n’uche ha, bịa n’oge, ma mekwaa ka ọrụ aka ha.
Mgbe m lụrụ di, mụ na nwunye m gara njem na Las Vegas na Laughlin. Abụghị m onye na-agba chaa chaa, ma ndị mụrụ ya bụ ndị ịgba chaa chaa. Naanị mama ya nyere m ndụmọdụ bụ ịkụ nzọ karịa. Anọ m ọdụ oge na-egwu vidio vidio na vidiyo vidio n'otu abalị ma na-atụfu $ 1.25 n'otu oge. Ọ dịghị ada ka nnukwu ihe, mana m nọ n’ọdụ ụgbọ mmiri n’oge ahụ enweghị m nnukwu ego. Echere m na 'ego mmefu ego anyị' bụ $ 30 kwa ụbọchị.
Mgbe obere oge gachara, mgbe m hụrụ ala bọket m, amalitere m itinye nkeji iri na anọ n'otu oge .. mgbe ahụ 4… mgbe ahụ 3… mgbe ahụ 2… wee kụọ Royal Flush. Nne nwunye m toro m - ruo mgbe ọ hụrụ ụgwọ nke $ 1. Ọgba ya dara. A sị na m gara n’ihu na $ 62.50 m, agara m enwe ihe dịka $ 1.25 ka baa ọgaranya. Kama, enwere m bọket ọzọ ebe obibi.
Amụtara m ihe m.
Gbasaa Nzọ Gị
Na m ugbu a ọrụ, M na enwetatụbeghị na-ekiri na-edebe ndị investors na azụmahịa na ọ bụ ihe onye opener. Ndị na-etinye ego anyị etinyeghị ego ha na-echekwa ego na ego ezumike nká ha ka ha na-agba chaa chaa. Kama nke ahụ, ha tinyere ego na ụlọ ọrụ 10 ma ha lebara anya nke ọma. Ha etinyeghi oge ha na ego ha n’otu azụmaahịa na-enwe olileanya, na-ekpe ekpere ma na-emesi ike na ọ ga-eme ya.
Ha gbasara ego ha n’achụmnta ego iri ma chọọ inyere azụmahịa ọ bụla aka site n’inyere ha aka ebe ha nwere ike. Offọdụ ndị na-azụ anyị na-enye nzaghachi dịka a ga - asị na ha bụ ndị ahịa. Fọdụ na-enye ego na ụfọdụ na-enye nzaghachi teknụzụ. Ha na-amata otu esi agha ha n'ime azụmaahịa ọ bụla ma ha kewaa ya otu. O juru m anya mgbe ha gwara anyị ka anyị fụọ $ 25k ebe a na $ 25k ebe ahụ ka a ga - asị na ọ nweghị ihe ọ bụ. Ọ bụ n'ihi na ọ is ihe ọ bụla.
Ha choro ka anyi tinye onu ogugu na itinye uche na ahia, obughi na ego ego.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ha anaghị azụ ahịa maka onye na-ebi akwụkwọ dị ọnụ ala ma ọ bụ na ha chọrọ ka anyị bụrụ.
Tags: oku na-esochijikọọenterpriseàgwàmkpebi ịzụtaịzụta nnyocharesearchere ahịantụgharị ucheomume ịzụ ahịa
Ntugharị eze na Black Jack, nke ahụ bụ hel nke aka!
Site n'ụzọ Doug, agbalịrị m ịpị permalink na post a site na ndepụta RSS wee nweta "Anyị enweghị ike ịhụ nke ahụ! Ma ị furu efu ma ọ bụ na anyị nọ!" ozi. Amaghị m ihe na-eme, mana echere m na ị ga-achọ ịma.
Ee! Chefuru 'na poker vidiyo'. Ihe mgbagwoju anya bụ na m kụrụ Keno n'abalị ikpeazụ wee kwụọ ụgwọ njem ahụ. Agbaghara m nnukwu jackpot ọzọ. Na ọdụ ụgbọ elu agbaghara m jackpot ọzọ. M na-adị ntakịrị oke mgbe ụfọdụ!
Re: RSS - Enwere m okwu mgbe mbụ ebipụtara ya. Echere m na o bipụtaghị ma agbanwere m post slug. A bụ m onye mmeri n'ezie n'abalị a! 😉
Doug - Ekwenyere m na oge bụ ego na iji otu awa na-achọ ọnụahịa kacha mma bụ ihe efu. Agbanyeghị, echeghị m na nke ahụ pụtara zụta nke mbụ ị na-ahụ na ọnụahịa ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ na-ewe m nkeji ise ịkpọ BestBuy.com, CircuitCity.com, Amazon.com na NewEgg.com ịhụ nke nwere kasị mma price, ọ bara uru oge maka m.